Mayelana NATHI - Shandong Xinya Import & Export Co., Ltd.
IShandong Xinya Industrial Co, Ltd. yasungulwa ngo-1965 okungumkhiqizi omkhulu wochwepheshe wohlelo lokujova uphethiloli. Imikhiqizo eyinhloko efana nepompo eyodwa / yamapayipi amaningi, i-injector, umlomo wombhobho, i-plunger, i-D / V ngokulandelanayo ibeke eyokuqala neyesibili emakethe yasekhaya.Siyabahlinzeki abaphambili bezitshalo eziyizinjini ezingama-70 eziyinhloko zenjini kadizili, inethiwekhi yokuthengisa ezweni lonke . Imikhiqizo nayo yathunyelwa emazweni angaphezu kuka-30 kanye nasezifundeni. Eminyakeni yamuva nje, sitshale imali engaphezu kwe-1 billion yuan ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwemikhiqizo yohlelo lokujova ujantshi ophakeme. Amandla wokukhiqiza azofinyelela kumasethi ayizigidi ezimbili ngonyaka we-2020.
Le nkampani inenkampani eyodwa ye-Imp & Exp kanye neyunithi yebhizinisi yokukhiqiza ezine ngokulandelana ezikhethekile ohlelweni lokujova ujantshi ojwayelekile, injini kadizili nejeneretha, izingxenye zenjini kadizili, imishini yensimu, isitsha sokuzigcina kanye nesakhiwo esihambayo njll.
Ngeminyaka engama-50 yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza okwenziwe ngemishini, imishini yokuphrinta esezingeni eliphezulu futhi ephelele, ukusakaza, ishidi lensimbi, ukumboza impuphu, imishini yokwelashwa ngokushisa, ukuhlolwa okunemba kanye nezinsimbi zokuhlola, uhlelo lokuqinisekisa ikhwalithi ephelele.Sakha uhlelo oluphelele lokunikezela ngokuthembela enkampanini machining isisekelo esiqinile, sithatha inzuzo yemishini eseduze, sihlanganisa izinsiza zomkhiqizo kazwelonke. Singakunikeza izinhlobo ezahlukene zemikhiqizo ephezulu yemishini ngokuya ngesicelo sakho.
Le nkampani isungule amagatsha e-USA, yamisa amahhovisi eYurophu nase-Australia. Iziteshi zokuthengisa ziphelele futhi ukuthekelisa ukusebenza kuye kwanda ngokushesha.
Isiphuzo se-injector, Uhlelo lwe-Fuel Injector, Denso Valve Plate, IBosch Rotor, Amasethingi we-F00vc01502 Valve, Okokhelekayo injector Rail,